Zavatra 5 tsy fantatrao momba ny fakantsary fiarovana anao | Vaovao momba ny gadget
Vaovao momba ny gadget | 26/04/2021 10:53 | Gadgets
Ilaina ny fiarovana ny tranonao, ny orinasa na ny biraonao. Ho an'ity, misy ny rafitra fanairana izay miaraka amin'ny fakantsary fanaraha-maso izay avelao hiaro ny faritra maro samihafa ary hahamarika ara-potoana ny fidiran'ireo mpiditra an-tsokosoko amin'ny fotoana tena izy. Na izany aza, azo antoka fa mbola misy izy ireo zavatra tsy fantatrao momba ny fakantsary fiarovana anao ary izany dia nanova azy ireo ho fitaovana mahomby.
1 Fakan-tsary ho tombontsoan'ny filaminana
2 Zavatra tsy fantatrao momba ny fakantsary fiarovana anao
3 Tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana fakantsary fanaraha-maso
Fakan-tsary ho tombontsoan'ny filaminana
Miasa toy ny a ny fakantsary fiarovana horonantsary mihidy izay mifamatotra amin'ny rafitra fanaraha-maso, izay hitan'ny olona manana fidirana azo atao ihany. Ny asany dia ny firaketana an-tsoratra zava-mitranga amin'ny fotoana tena izy, fakana sary amin'ny zoro samihafa ary mandefa mivantana izay mitranga na dia ao anatin'ny 360 ° azaka ny tompona dia manana fitaovana fanohanana sarobidy raha misy ny halatra.
Mpampiasa maro no manana fakantsary fanaraha-maso mifandraika amin'ny fanairana, amin'izao fotoana izao, ankoatry ny fampiasana serivisy foibe toa ireo nomen'ny Movistar Prosegur Alarm, satria hitany fa a singa fototra mba hiarovana ny tranonao na ny orinasa amin'ny fotoana rehetra.
Etsy ankilany, ny orinasa toa ny Prosegur dia manolotra serivisy isan-karazany izay azonao atao ny misafidy ny maodely fakantsary fanaraha-maso mifanaraka amin'ny ilainaoNa mila fitiliana mihetsika amin'ny efitrano lehibe na efitrano kely ianao.
Zavatra tsy fantatrao momba ny fakantsary fiarovana anao
Na eo aza ny zava-misy fa lasa malaza ankehitriny ny fakantsary fiarovana ary ampiasaina mifanakalo amin'ny karazana trano isan-karazany, Misy ny te hahafanta-javatra momba azy ireo izay mety mbola tsy fantatrao, toy ireo voalaza etsy ambany:
Mandritra ny taona Ny fakantsary fiarovana 1960 dia nampiasaina hanaraha-maso ny fandefasana balafomanga any Alemana. Walter Bruch no namolavola ny rafitr'izy ireo, mba hanarahana ny hetsika nefa tsy hampidi-doza ny ain'ny mpiasa ao aminy.
Tamin'ny alàlan'ny fandalinana natao tamin'ny taona 2014 dia voafaritra fa farafahakeliny farafahakeliny 245 tapitrisa fakan-tsary fiarovana manerantany, miasa tanteraka, tarehimarika iray izay tsy isalasalana fa nitombo androany noho ny fandrosoan'ny teknolojia sy ny fidirana amin'ny Internet mora foana.
Fantatrao ve fa isaky ny mampiasa ny ATM ianao dia harahi-maso amin'ny fakan-tsary? Raha ny marina dia maro ny trangana fisolokiana voavaha noho ireo sary voarakitra ao amin'ireo fitaovana ireo.
Misy izany toerana izay apetraka mandrakariva ny fakantsary fanaraha-maso izay mitahiry mandrakitra 24 ora isan'andro, toy ny any amin'ireo ivon-toeram-pivarotana, fivarotana lehibe, banky, làlambe ary lalana lehibe any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe.
Miasa tsy misy herinaratra ny fakantsary fiarovana sasany, noho izany dia nomena bateria iray ahafahan'izy ireo mitazona an-tsoratra ao anatin'ny fetra voafaritra iray.
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia manana finday mamela azy ireo hifandray amin'ny Internet, amin'izay dia azon'izy ireo atao ny miditra amin'ireo sary nomen'ny fakantsary fanaraha-mason'izy ireo amin'ny alàlan'ny rindranasa nomen'ny mpanome fanairana azy ireo sy jereo amin'ny fotoana tena izy ny zava-mitranga ao anatin'ny fanananao, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana fakantsary fanaraha-maso
Ny fakantsary fanaraha-maso dia mason'ny rafitra fiarovana anao, izy ireo dia manana fahefana hamantatra ny hetsika amin'ny alàlan'ny sensor misy stratejika sy mampihetsika ny fanairana amin'ny fotoana mety izay voasoratra anarana ao anatin'ny foibe toa an'i Movistar Prosegur, izay hampandre ireo tompon'andraikitra mifandraika amin'izany ao anatin'ny fotoana fohy.
Mba hihazonanao ny trano sy ny orinasanao ho voaro, azonao atao ny misafidy ny rafitra fanaraha-maso tsara indrindra ary alao antoka fa manana fakantsary mahomby izy io ary miaraka amin'ny sisiny ampy fandrakofana. Tokony hoheverinao ihany koa ny zavatra ilainao manokana, satria miankina amin'izy ireo ianao dia hitarika ny safidin'ny fakantsarinao fiarovana tsara.
Ohatra, ho hitanao ny sasany misy sakany maro toy ny thermal, fa ny kalitaon'ny horonantsary tsy dia tsara loatra; raha mbola ireo mahazatra izay tsy dia misy firakofany dia ahafahanao mamantatra ny toetran'ny mpiditra an-tsipiriany amin'ny antsipiriany. Etsy ankilany, rehefa mampiasa PTZ ny fivezivezena hijerenao dia manana fivezivezena izy io, izay manamora kokoa anao mifehy faritra manokana.
Tokony ho tadidinao ihany koa izany Tsy mitovy ny manarona ny fiarovana ny fisaka, chalet na birao noho ny indostria, Amin'izay ianao dia mila misafidy ny isan'ny fakantsary ilaina mba hiantohana ny fandrakofana isan-karazany.
Amin'ny ankapobeny, ny rafitra fakantsary fakantsary fanaraha-maso dia misy ao anaty kitapo fanairana toy ireo avy amin'ny Movistar Prosegur Alarmas, izay ahitàna ireo kojakoja ilaina rehetra amin'ny fametrahana an'ity rafitra fiarovana ity ary manolotra fifandraisana maharitra amin'ny foibem-pandraisana anao. Miasa ho maso sy sofina matihanina , miambina ny tranonao na ny asanao 24 ora isan'andro, 365 andro isan-taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Zavatra 5 tsy fantatrao momba ny fakantsary fiarovana anao
Huawei manavao ny solosaina findainy MateBook D 15 miaraka amin'ny chips Intel vaovao